हेलो महापुरुष! तिम्रो विर्यको मुल्य कति ? – JanaSanchar.com
हेलो महापुरुष! तिम्रो विर्यको मुल्य कति ?
संबाददाता : रमाकान्त बास्तोला	प्रकाशित मिति: (२०७४ पुष १२, बुधबार) ०३:१३
मैले धेरै कोशिस गरेर उसको फोन नम्बर पत्ता लाएकी थिएँ । म आफै उसँग भेट्न चाहन्थे तर किन मन बेचैन थियो । म जुन कुरा उसँग गर्न चाहँदै छु त्यो कुरा गर्न मैले धेरै वर्ष अगाडि नै साहस बटुलेको थिए । त्यो दिन बर्षाैदेखि नियतीले पढाएको पाठको परीक्षा दिने दिन जस्तो लागेको थियो ।
दुब्लो मान्छे, चुच्चो नाक अनि खैरो कमिज सुरुवालमा कालो स्टकोट लगाएको थियो । उसले तपाई नै हो ? भनेर प्रश्न ग-यो । मैले हो भने अनि क्याबिनमा गएर कुरा गरौँ भने । जहाँ कोही मान्छे नहोस् भन्ने म चाहन्थे । उसले हुन्छ भन्यो म क्याबिन तिरको सिँढी चढ्न थालें । उ मेरो पछि पछि लाग्यो ।
‘म पनि धेरै वर्ष अगाडि त परियोजनामै काम गर्थे नि !’ उसैले सुरु ग-यो । जुन कुरा म कोट्याउन चाहन्थें उसैले गोरेटो बनायो । मैले सोधें – कुन परियोजनामा काम गर्नु हुन्थ्यो ?
‘वन सम्बन्धी काम गर्ने । खाना बनाउनेदेखि अफिसको सबै काम जानेको छु ।’ उसले गरेको कामको बयान ग-यो ।
मैले थप सोधें – तपाईं काम गर्दा देवयानी भन्ने महिलालाई चिन्नु हुन्थ्यो ? मेरो प्रश्नले ठुलै प्रहार गरे जस्तो विम्व उसको अनुहारले बोल्यो । अँध्यारो अनुहार लगाएर प्रतिप्रश्न ग-यो – किन र ?
मैले ब्यागबाट देवयानीको फोटो झिकेर देखाउदै भने – यिनी नै हैनन् देवयानी ? उसले एक छिन मैले देखाएको फोटो नियालेर हे-र्यो अनि सानो स्वरमा ‘हो’ भन्यो । ‘अनि तपाईले कसरी चिन्नु भयो यिनलाई’ भनेर प्रश्न गर्दा उसको आवाज बेग्लै भैसकेको थियो । एकदम डराएको जस्तो आत्तिएको जस्तो । मैले मुसुक्क हाँस्दै फोटो ब्यागमा हालें तर उसको जवाफ दिइन । अनि के भयो । बच्चा जन्माइन् तिनले ? के जन्मिए छ ? अहिले कता छिन केही थाहा छ ? मैले एकैपटक प्रश्नका चाँङ लगाइदिएँ ।
मेरो कुरा सुनेर रातो रातो आँखा पार्दै उसले भन्यो – के नचाहिने कुरा गरेको ! मलाई कायर भन्ने तिमी को हौ ? अघिसम्म तपाई भनेर सम्बोधन गर्ने मान्छे तिमीमा पुगेको थियो । ‘साँच्चै सुन्न चाहन्छौ म को हो भनेर ?’ हिम्मत जुटाउ पहिला । म पनि तिमीमै ओर्लिएँ । अनि थपें – म तिम्रै विर्यको एक थोपा हुँ । देवयानीकी छोरी । जसलाई तिमीले जन्म दिन चाहेका थिएनौ । आज तिम्रै सामु छे …
किन केही बोल्दैनौ ? तिमी नै हैनौ मेरो बाउ ? तिमीले नै हैन मेरो र मेरी आमाको जीवन बर्बाद बनाएको ? तिम्रो कारणले मैले यो समाजको कति धेरै प्रश्नमा निरुत्तर भएँ । किन त्यस्तो ग-यौ तिमीले । अझै हैन भन्न सक्छौ । कति भाग्छौ यथार्थबाट । मैले सयौं प्रश्न गरे । मेरो प्रश्नको जवाफ मात्र उसको आँशु थियो ।
अन्तत: बोल्यो – ‘हो म नै हो तिम्रो बाउ । म र देवयानी एक अर्कालाई प्रेम गथ्र्यौं । तर, मेरो घरमा छोराछोरी समेत थिए । देवयानी गर्भवती भएको थाहा पाए पछि मैले धेरै फकाएँ यो गर्भ फालौं भनेर । उनले मानिनन् । त्यसैले उनलाई र गाउँ छाडेर म भारत पुगें । उनले किन हो यसको पेट भनेर हल्ला गरिनछन् । झन्डै बाइस वर्षपछि नेपाल आएँ । आज उनी कहाँ छिन, कस्तो अवस्थामा छिन्, केही थाहा छैन । मैले त मेरा पुराना दिनहरु समेत भूलिसकेको थिएँ । मैले तिमीसँग एक दिन भेट होला भन्ने त सपनामा समेत सोचेको थिइन । मलाई माफ गर छोरी तिम्रो अभागी बाउलाई । के चाहन्छौ तिमी म त्यही गर्छु ।’
‘के कुरा छोरी ?’ उसले लाचार बालकले झैं शिर निहु-यायो ।
– महिला खबरबाट रिपोष्ट गरिएको
(२०७४ पुष १२, बुधबार) ०३:१३ मा प्रकाशित
अचानक हुने खाने भयौ कसरी ? – -कृष्ण क्षेत्री
कविता : बिद्रोही मन – कृष्ण क्षेत्री
लघुकथा : झुत्रे कमरेड तारा – सुरज उपाध्याय